About Antigua & Barbuda | Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda
Antigua sy Barbuda dia firenena kambana mitaiza izay misy eo anelanelan'ny Ranomasina Karaiba sy ny Ranomasimbe Atlantika. Misy nosy lehibe roa misy mponina, dia ny Antigua sy Barbuda, ary nosy maromaro kokoa.
governemanta: Monarchie federaly, rafitra parlemantera
Renivohitra: Md Joany
Kaody fanoratana: 268
Sandam-bola: Dingana tandrefana any Karaiba
Fiteny ofisialy: anglisy
Antigua sy Barbuda dia firenena Commonwealth mahaleo tena any Atsinanan'i Karaiba. Antigua dia hitan'i Christopher Columbus voalohany tamin'ny 1493 ary lasa fonenan'ny anglisy. Teo ambany fitarihan'i Lord Nelson, izy no lasa tafika an-dranomasina any Grande-Bretagne izay nandehanan'i West Indies azy.
Antigua dia 108 km kilaometatra na 279.7 km km, Barbuda dia 62 km kilaometatra na 160.6 km km. Miaraka amin'i Antigua sy Barbuda dia 170 km kilaometatra na 440.3 km km. Antigua sy ny tampon-tanany lemaka dia tsara mba hamokarana ireo paraky tany paraky, sy landihazo ary ginger. Ny indostrian'ny indostrian'ny indostria kosa dia namolavola fambolena fary izay maharitra nandritra ny 200 taona. Androany, manana ny fahaleovantenany 30 taona avy any Grande-Bretagne, ny indostrian'ny Antigua dia ny fizahan-tany sy indostrian'ny serivisy mifandraika. Ny mpampiasa lehibe indrindra dia ny indostrian'ny serivisy momba ny fitantanam-bola sy ny governemanta.
Antigua sy Barbuda dia monarkiera momba ny lalàmpanorenana miaraka amin'ny rafi-pitondram-pahefana paritany britanika. Ny Mpanjakavavy dia manana ny solontenany, dia ny Jeneraly Governemanta voatendry, izay misolo tena ny Mpanjakavavy ho Lehiben'ny Fanjakana. Ahitana efitrano roa ny governemanta: trano fonenana mpikambana 17 voafidy, notarihin'ny praiminisitra; ary ny Antenimieram-pirenena 17. 11 amin'ireo mpikambana ao amin'ny Antenimiera no notendren'ny Governemanta Jeneraly eo ambany fitarihan'ny praiminisitra, mpikambana efatra no voatendry eo ambany fitarihan'ny Lehiben'ny mpanohitra ary roa avy amin'ny Governemanta Jeneraly. Ny fifidianana ankapobeny dia adidy isaky ny dimy taona ary azo antsoina mialoha kokoa. Ny Fitsarana Ambony sy ny Fitsarana Ambony dia ny Fitsarana Tampony Karaiba Atsinanana ary ny Konseho Privy any Londres.
Miaraka amin'ny moron-dranomasina 365 eo ho eo amin'ny farihy madio turquoise madio, ny nosy tropikaly maloto any Antigua sy Barbuda dia paradisa manasa ary heverina ho iray amin'ny toerana mahafinaritra indrindra eto an-tany. Vokatr'izany, ny fizahan-tany no mpamaky ny GDP ary mamokatra manodidina ny 60% ny vola azon'ny nosy, ary ny tsena mikendry indrindra dia Etazonia, Kanada ary Eropa.
Antigua sy Barbuda dia niaina tontolo ara-toekarena sarotra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Na izany aza, ny Governemanta dia nindramina tamin'ny fampiharana ny Drafitra Nasionaly momba ny fanovana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ezaka fanarenana trosa. Iray amin'ireo tetik'asa fanohanana ny toekarenan'ny nosy ny fampidirana programa momba ny zom-pirenena.
Ny fanoloran-tena i Antigua sy Barbuda amin'ny fanompoana ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fampitomboana ny harinkariny dia aseho miaraka amin'ny fahavitan'ny tetik'asa fanitarana ny seranam-piaramanidina. Mitentina 45 tapitrisa dolara ny $ XNUMX tapitrisa ary tafiditra ao ny tetezana mpandeha fiaramanidina telo ary mpanisa tapakila am-polony roa mahery, amin'ny famoronana fahombiazana amin'ny fahatongavan'ny mpandeha. Io koa dia ahafahana mitombo ny andiam-piasana nomanina, ny sata ary ny seranana misy eo amin'ny nosy. Efa misy sidina mivantana mankany Antigua avy any Londres, New York, Miami ary Toronto amin'ny toerany.
Ny mponin'i Antigua sy Barbuda dia tsy mahazo tombony amin'ny hetra na haba amin'ny hetra. Mandroso ny 25% ny hetra miditra amin'ny fidiram-bola ho an'ny tsy mponina, fa 25% kosa ny tahan'izy ireo. Fanitsiana ny soso-kevitra amin'ny Fizarana 111 Fizarana 5 ao amin'ny lalàna momba ny hetra fidiram-bola dia hanova hetra amin'ny vola miditra manerantany ho amin'ny hetra amin'ny vola miditra ao Antigua sy Barbuda.
Ny vola dia ny dolara Karaiba Atsinanana (EC $), izay mitentina amin'ny US $ amin'ny 2.70 EC $ / US $. Antigua sy Barbuda dia mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana (ONU), ny Commonwealth anglisy, Caricom ary ny Fikambanana amerikanina (OAS), miaraka amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena maro hafa. Ireo mpihazona ny pasipaoro Antigua sy Barbudan dia mankafy ny fizahana malalaka amin'ny visa mankany amin'ny firenena mihoatra ny 150, ao ny Fanjakana Mitambatra sy ireo firenena ao amin'ny faritr'i Schengen. Ireo mpihazaka io pasipaoro io, tahaka ny firenena Karaibeana rehetra, dia mitaky visa hiditra ao Etazonia satria tsy mpikambana ao amin'ny Visa Waiver Program izy ireo.